Tilmaamaha Safarka Jericho - Makhaayadaha - Masaajidyada - Hoteelada Saaxiibtinimada Muslimiinta
Tilmaamaha Safarka ee Jericho
Yerixoo (Carabi أريحا Arīḥā), "Magaalada Timirta", waa magaalo yar oo ku dhex taal dhulalka Falastiiniyiinta ee ku dhow dhamaadka waqooyiga dhamaadka Badda Dhimashada iyo in ku dhow 55 km (34 mayl) Yeruusaalem.
Magaalo deggan oo deggan, magaceeda Jericho ee xasilloonida iyo la'aanta dhacdooyinka nabadgelyo ee ka dhex jira khilaafka Israa'iil iyo Falastiiniyiinta ayaa ka dhigtay meel dabiici ah booqdayaasha Daanta Galbeed. Sababtoo ah Jericho waa magaalo u jiheysan dalxiis, Maamulka Falastiin wuxuu aad ugu socdaa dadaal dheer si loo hubiyo in Jericho ay nabad ku tahay booqashada. Booliis dalxiis-joogto ah ayaa ku sugan magaalada Ingiriisigana waxaa ku hadla dad badan oo magaalada jooga.
Magaalada casriga ah ee Yerixoo waxaa ku jira buulkii qadiimiga ahaa ee loo yaqaan U sheeg es-Sultan, Hadhaagii magaalooyinkii ururay ee ka jiray goobta illaa 9,000 sano - xilligii Neolithic. Qadiimiga ah wuxuu muujinayaa in Yerixoo ay tahay mid ka mid ah degsiimooyinka aadanaha ee ugu da'da weyn Bariga Dhexe.
Yerixoo, dabcan, waxay u badan tahay inay caan ku tahay uruurinta kitaabiga ah: (hees) "Yashuuca wuxuu diriray dagaalladii Yerixoo - oo derbiyadiina way dumiyeen!"
Maaddaama ay ku taal meel u dhow 400 mitir ka hooseeya heerka badda, Yerixoo waa mid aad u kulul xagaaga!
Hadhaagii Qasriga Hisham
Laga soo bilaabo Yeruusaalem, ka bilow saldhiga HaNeviim ee ka baxsan Magaalada Hore, ee ku xigta Iridda Dimishaq. Halkaas, mid waa inuu bas / bas u raacaa mid ka mid ah saddexda magaalo ee Falastiin, oo bas labaad / bas u raacaa Jericho. Saddexda magaalo waa (siday u kala toosan yihiin):
(Al) Ezariya (Isgoys) | nooca = agagaarka | alat = 31.764093 | dheer = 35.281162}} - Baska 36 ama 63 (₪ 6.80) wuxuu gaaraa magaaladan / isgoyskaas bariga Yeruusaalem, oo loo aqoonsaday Bethany ee Axdiga Cusub. Weydiiso darawalka baska meesha uu uga baxayo gaariga sherut van (depending 10-12 iyadoo ku xiran niyadda darawalka) aad u tagto Jericho ama u qaado tilmaamaha GPS sida jihada. Waxaa lagugula talinayaa inaad haysato turjubaan Carabi ah ama aad si gaar ah u waydiiso darawalka baska meesha laga heli karo taksiga Sharut / Wadaag. Haddii kale, ka raac baska 263 (₪ 6.80) saldhigga Sultan Suleymaan, sidoo kale u dhow iridda Dimishiq, oo istaagi doonta isgoyska sidoo kale.
Beytlaxam - Gawaarida "sherut" ee ka soo baxa dabaqa hoose ee istaanka basaska Beytlaxam waxay qaadataa qiyaastii saacad si ay u timaado barxada dhexe ee Yerixoo (₪ 20).
Ramallah iyo Nablus oo ay wadaagaan taksi (sherut).
Waxaad sidoo kale ka garaaci kartaa koonfurta dhanka Badda Dhimashada ama Tiberias waqooyiga. Si kastaba ha noqotee, baska loo yaqaan 'Egged bus' ee halkaas ka imanaya sida muuqata ma istaagi doono kahor Qudus si uu rakaabka u sii daayo - weydii marka uu soo galayo
Laga soo bilaabo isgoyska Allenby Bridge xadka, waxaa jira bas toos ah oo adiga kuu geyn doona boosteejada basaska ee bariga xarunta, halkaas oo aad uga gudbi doontid kantaroolka xadka Falastiin. Halkaas, waa tagsi taksi ah oo 2 kiiloo mitir ah ama (hoos u dhac) socod bartamaha magaalada ah.
Adeegga tagaasida ee Yerixoo waa fududahay in la helo. Hubso inaad ku heshiiso qiimaha darawalka taksiga intaadan galin taksiga. Qiimaha tagaasida tagaya gudaha Jeriko waa inuusan ka badnaan ₪ 10. Taksi ahaan loo raaco goobaha ku yaal duleedka Jeriko, waxaa ugu wanaagsan in laga wada xaajoodo qiimo macquul ah.
Tagaasida la wadaago ee ka yimaada / ilaa xarunta ayaa qiyaastii ah ₪ 2.
Dhulkii laga qoday Tell Es-Sultan
U sheeg es-Sultan (Jericho hore). Goobtani waa xarunta qodista qadiimiga ah ee Jericho. Waxay ahayd meeshii Jericho qadiimiga ahayd xilliyadii Kitaabka Quduuska ah waxayna ku taal meel 2 km waqooyi-galbeed ka xigta Xarunta magaalada casriga ah, oo iska indho tiraysa guga dabiiciga ah ee Ein Sultan. Haddii aad doorbideyso inaad xoogga saarto waxyaabo kale, markaa way fududahay inaad aragto dulucda goobta oo ka socota waddooyinka ku xeeran. Goobta baabuurka la dhigto ma leh hal laakiin waa laba il oo kala duwan oo labaduba sheeganaya inay yihiin ilkii Eliisha. ₪ 10 (intl. Ardayda ₪ 7).
Shalom al Yisrael Sinagogga Dabaqa Muuse (inta udhaxeysa Tel es-Sultan iyo Qasriga Hisham, waxaa ku yaal dabaqa sunagoga laga soo bilaabo qarnigii 6aad ee CE. Raadi calaamadda qalooca, oranjiga ah ee oraneysa Sinagog ama בית כנסת, fiiri si toos ah wadada dhinaceeda waxaana jira waddo si jajab ah ugu socota calanka Falastiin qaarkood.). Dabaqa sinagoggu wuxuu ku yaal qaybta hoose ee guri gaar loo leeyahay oo ay leeyihiin qoys reer Yeruusaalem ah, Shahwaans, dhamaadka wadada. Qoysku waxay ogaadeen goobta oo ay sii wadeen ilaalintiisa ilaa reer Israel ay la wareegeen dhulkii iyo gurigii 1987. . 10.
Qasriga Hisham (2 km waqooyi ka xigta Jeriko casri ah). Qasrigan qaboobaha waxaa dhisay Khaliifkii Umawiyiinta Hishaam Ibnu Cabdul Malek, kahor intaan lagu burburin dhulgariir isla waxyar kadib markii la dhameystiray 747 CE. Goobta ballaadhan waxay ka kooban tahay dhismayaal boqortooyo, masaajid, ilaha biyaha iyo dabaqyo qurux badan oo mosaic ah. . 10.
Sycamore Tree of Yerixoo (Geedka Zacchaeus) (qayb ka mid ah matxafka Ruushka). Geedkan waxaa lagu tixraacay Axdiga Cusub sababo la xiriira xiriirkii uu la lahaa booqashadii Ciise ee Jericho: “Ciise wuxuu galay Yerixoo wuuna dhex marayay. Oo bal eeg, waxaa jiray nin Sakhayos la odhan jiray; wuxuu ahaa taliyihii cashuuraha oo wuxuu ahaa taajir. Wuxuu damcay inuu fiiriyo Ciise, laakiin isagoo nin gaaban ah ayuu arki kari waayey dadka hortiisa. Hore buu u orday, oo wuxuu fuulay geed sukomoor inuu isaga arko, waayo, Ciise jidka ayuu mari doonaa. (Luukos 19: 1-4, NET Bible) ₪ 5, kaliya jardiinada & geedka (matxafku waa is 20).
Quruntal (Buurta Imtixaanka). Kaniisad Orthodox ee Giriigga ayaa ku taal halkan, buurta dusheeda halka Ciise la rumeysan yahay inuu Ibliisku jirrabay. Waxaa ku yaal laba wadaad oo Greek Orthodox ah. Midkood wuxuu ka yimid Griiga bishii Nofeembar 2010 markuu ahaa 30, wuxuuna joogi doonaa halkaas inta noloshiisa ka dhiman. Midka kalena halkaas ayuu joogay muddo tobanaan sano ah. Laga soo bilaabo meeshan khatarta ah ee dhagaxa weyn, waxaad ka heli doontaa aragti weyn oo ku saabsan Yerixoo iyo Webi Urdun xagga Cammaan. Ku fuula buurta dusheeda, haddii kalese soo qaado Baabuurka ugu dheer adduunka ee ka hooseeya heerka badda laga bilaabo buurta salkeeda (eeg Do hoose).
Goobta Baabtiiska Ciise (Qasr al Yahuud). Waxay ku taal meel u dhow Yerixoo oo ku taal Webi Urdun halka laga sheegayo inuu Ciise ku baabtiisay Yooxanaa Baabtiisaha Webiga Urdun (goobtan oo ku taal Yerixoo waxaa la tartamaya mid kale oo ka tirsan Waqooyiga Israel oo ku taal Yardenit). Waxaa sidoo kale la rumaysan yahay inay tahay barta lagu sharaxay Axdigii Hore ee reer binu Israa'iil ay ka gudbeen wabiga si ay u galaan Dhulka Kancaan.
Wago Qelt Sinagog. Sunagoggan waxaa loo malaynayaa inuu yahay sunagoggii ugu da'da weynaa adduunka oo wuxuu qayb ka yahay dhismaha "Jericho Royal Winter Palace" oo laga dhisay Muddadii Labaad ee Macbadka.
Qasrigii Herodos (burburkii) (Tulul Abu el-'Alayiq) (qaado wadada dhanka galbeed ka xigta wareega wareega ee ku teedsan masaajidka albaabka laga galo xarunta). Maaha wax aad u cajaa'ib leh, laakiin xiiso leh haddii aad ku jirtid mawduuca. Si ku habboon ugu yaal jidka loo maro ama looga baxo Wadi Qelt.
Guriga Naaran (6-7 km waqooyi galbeed ee xarunta). Sunagoggan quruxda badan ee qadiimiga ah ayaa sidoo kale ku jira dabaq lagu qurxiyay mosaics.
Monastery of Gerasimus ee Webi Urdun (Diir Hajla) (Koonfur-bari ee Jeriko, wadada # 90),. Daily 08: 00-18: 00. Kaniisadda Orthodox ee Giriigga ee Deir Hajla oo u dhow Jericho ayaa lagu xusaa St. Gerasimus, oo lavra u dhow yahay. Gerasimus wuxuu ka tegey hantidiisa qoyskiisa iyo arrimaha adduunyada si uu u noqdo wadaad. Wuxuu aaday gobolka Thebaid ee kuyaal lamadegaanka Masar, markii dambena mar labaad ayuu ku noqday waddankiisii ​​hooyo ee Ludiya. Qiyaastii bartamihii qarnigii 5aad Saint Gerasimus wuxuu aaday Falastiin wuxuuna degay cidlada agagaarka Webiga Urdun. Halkaas wuxuu ka aasaasay guri keniisad ah wuxuuna caan ku noqday noloshiisa xaqa ah ee ducaysanaanta iyo salaadda. Sheekada Gerasimus iyo libaaxa, markii awliyadu xayawaanka ku rabbeeyay isagoo qodax ka saaraysa cagihiisa oo baray addeecid, ayaa si weyn looga yaqaanay dunida Masiixiyiinta. Waxaa lagu tiriyaa inuu kaqeyb galay Golaha Afaraad ee Ecumenical Council ee Chalcedon sanadkii 451. Taariikhda suugaanta sidoo kale waxay kuxirantahay sheeko kale oo masiixi ah. Maryan, Yuusuf iyo ilmaha yar ee Ciise ayaa la sheegay inay hoy ka heleen halkaan markii ay ka duulayeen Herodos. Kaniisad dhulka hoostiisa ah ayaa laga dhisay isla meeshii la aaminsan yahay in Qoyska Quduuska ahi ku hoydeen. Dabaqa loo yaqaan 'crypt' waxaa sidoo kale ku jira lafihii suufiyadii la xasuuqay xilligii Faaris ay qabsatay dhulkii barakeysan.
Kaqeyb qaado booqashada qadiimiga ah ee qodo badan oo qadiimiga ah oo ka dhacaya aagga Jeriko.
Sidoo kale, Jericho waxay dadka deegaanka u yaqaanaan inuu yahay aag ku hareeraysan hareero qurux badan. Waxaa jira jidad socod fara badan Kuwaas oo leh aragtiyo qurux badan oo ku saabsan aagagga ku xeeran Yerixoo. Hubso inaad keento biyo fara badan, Yerixoo sidoo kale dadka deegaanka waxay ku yaqaaniin jawigeeda kulul.
Tag a awr geel cidla ah. Weydii reer baadiyaha oo ku wareegaya geel qurxin leh. Aad u xiiso badan! Hubso inaad ku heshiiso qiimaha intaadan gacanta gelin.
Gaariga Cable (Xuquuqda ku xigta u sheeg es-Sultan). Shirkadda Gawaarida Jericho Cable si ay u gaarto Monastery Mount Temptation halkii ay ka socon lahayd. ₪ 55 oo loogu talagalay safar 7-daqiiqo ah oo ku saabsan 1.35 km.
Xeebta Kalya. Xeebtaan oo ku taal Badda Dhimatay waxaa maamula deegaanka u dhow Israa’iil ee Kalya. Waxay badanaa u oggolaadaan Falastiiniyiinta inay sidoo kale isticmaalaan xeebta. Tagaasida (la Wadaago) waxaa laga abaabuli karaa Yerixoo.
Beerta Madadaalada Mooska,. Maalin ku baashaal beerta nasashada.
Waxaa jira Bedouins iibiya alaabo kala duwan oo ku yaal Jericho, laakiin qiimayaashoodu aad ugama jaban yihiin meelaha kale. Cuntada, si kastaba ha noqotee, si aad ah ayey uga jaban tahay Jeriko.
Meel u dhow Barxadda Dhexe, waxaa jira meelo badan oo qaniinyada degdegga ah, gaar ahaan jihada Geedaha 'Sycamore Tree' ama 'Hisham's Palace'.
Waxaa habboon in la booqdo buurta Qurantal oo ah meeshii uu Ciise ka soomay 40 maalmood iyo 40 habeen ka hor intaan Ibliisku ku dhicin isaga, halkaas oo aad ka heli doontid makhaayad aad u fiican oo ka hooseysa buurta. Buugga waa la ogol yahay wuxuuna ku kacayaa qiyaastii US $ 15 madaxkiiba qadada. Weydiiso inaad banaanka u fariisato aragti dusha sare ah oo aan caadi ahayn. Waxaad qadadaada ku horheli doontaa shimbiro la yaab leh oo indhaha shimbiraha indhaha u ah magaalada Jeriko, buuraha Urdun iyo Badda Dhimatay. Waxaad ku imaan kartaa makhaayaddan adiga oo isticmaalaya Cable Car of Jericho.
Makhaayadaha Limonä Jeriko (Limonah), Wadada Muntazhat,. Wanaagsan laakiin qaali ah.
Kaniisadda Orthodox ee Giriigga ee Imtixaanka waqooyiga Jeriko
Halkee laga joogaa Yerixoo
AubergInn (Guriga Eggplants) (U dhow Tell Es-Sultan),. Mid ka mid ah ikhtiyaariyada miisaaniyadeed ee ugu fiican magaalada una dhow buurta jirrabaadda iyo goobo kale. Guri carabi ah oo gadaal loo dhigay oo ku yaal beer, oo leh bisado badan, digaag iyo dameero. Waxay leedahay mootooyin bilaash ah oo la isticmaalo. -80 100-200 oo loogu talagalay qolalka 350-60 gaarka loo leeyahay (waxaa jiray heshiis for 2017 bishii Abriil XNUMX haddii aad sii joogtid Hoteel ku yaal Ramallah intaa ka hor oo halkaas ayaa lagu uruuriyay shaabad). (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Hoteelka Jericho Waleed (Xafiiska ka soo horjeedka xafiiska boostada, hoy 2 km waqooyi-bari ka xiga wareega dhexe),. Dhab ahaantii tani waa uun xafiiska Waleed, the meesha dhabta ah ee uu degi doono Waleed waa halkan. Wuxuu leeyahay wade dadka geyn doona dhismaha waqooyi-bari ee magaalada. Mulkiiluhu waa nin wanaagsan oo waxtar leh; Nasiib darrose, ereyo wanaagsan & wacnaan ma buuxin karaan raaxo la'aanta iyo jaangooyooyinkan xulashada hoygu ka maqan tahay. Intii guriga weli uu ku socdo dhisme weyn, dabaqa saddexaad waa furan yahay. Guud ahaan, qolalka waa buuq badan yihiin martida kale iyo dahaadhka xun. Meesha waxaa ku faafay kaneeco, oo aad moodo inay meel aan jirin ka soo baxday, si aan dhammaad lahayn. Martigelinta tayada ka sareysa, waa inaad adigu iskaa u go'aamisaa. Hoyga wuxuu ku habboon yahay safarada xadka Urdun iyo Badda Dhimatay. Laga soo bilaabo ₪ 60.
Dhismaha Dhalinyarada ee Saami,. Hoteelku wuxuu ka kooban yahay dhammaan adeegyada hudheellada iyo tas-hiilaadka, wuxuu ka kooban yahay 22 qol iyo 5 qolal. Qolal ayaa loo qaabeeyey si ay ugu habboonaadaan baahida booqdayaasha. La heli karo waa hal qol, laba jibbaar iyo saddex laab ah; dhammaantood ku qalabaysan qaboojiye, telefishan, isku xirayaasha qalabka, dayax gacmeedyada, qaboojiyeyaasha iyo adeegga internetka. . 172.
Jericho Inn, Vered Yerixoo (gudaha Dejinta Yuhuudda ee u dhow Yerixoo, sidaa darteed way noqon kartaa khiyaano inaad gasho ama ka baxdo haddii aad sidoo kale rabto inaad booqato Jeriko),. Wadada tagta Jerixoo dhanka bidix, dejinta Yuhuuddu waxay leedahay ikhtiyaar kale oo miisaaniyadeed oo ku hareeraysan Yerixoo. Odhaahda: "Ku jiifso xeradii ku dhex taallay jardiinada ama ku nasashada mid ka mid ah qolalkayada qurxoon, waxaad ku raaxeysan doontaa jawiga xiisaha leh ee baadiyaha ee Jericho Inn." Xubin ka tirsan ILH. Qolka jiifka laga bilaabo ₪ 100.
Guriga Martida ee Zeytouna,.
Hoteelka Hisham Palace,.
Hotel Jericho Oasis (hore Interncontinental),. Hoteel 5-xidig ah isla markiiba koontaroolka Falastiin ee laga soo galo Jericho. Huteelka waxaa la dhisay ka hor inttifada labaad waana mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan Falastiin iyo sidoo kale dhismaha ugu dheer magaalada Jericho oo siiya qol kasta si qurux badan loo magacaabay aragtiyo maylal ah. Hoteelku wuxuu leeyahay 3 barkadood oo lagu dabaasho, biyo dhaamis iyo barkad leh biyo badeed dhintay. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Tuulada Dalxiis ee Jericho,. Waxaa la dhisay dhammaadkii 1990-yadii Tuulada Jericho Resort waa hudheel 4-xiddig leh dhowr barkadood oo lagu dabaasho, cunno wanaagsan, bungalows dhinac yaal ah iyo spa dusha sare. Hoteelka ayaa sidoo kale leh xarumo shirar oo yar-yar iyo baarka barkadda dhinaceeda.
Dhammaan magaalooyinka waaweyn ee Falastiin waxaa si toos ah ugu adeega tagaasida la wadaago (sherut / serviis) halkan, mararka qaarkoodna is-weydaarsi lagama maarmaan ah. Ku safridda magaalooyinka Israel way noqon kartaa khiyaano laakiin waa macquul; Weydii macluumaadka dalxiiska deegaanka wareega wareega.
Tiberias - Waa magaalo weyn oo Israa’iil ku taal woqooyiga oo bilow weyn u ah Galili iyo Golan.
Nablus - Mid ka mid ah magaalooyinka ugu faca weyn adduunka oo caan ku ah kunafa / kenafeh. Haddii aad ku jirto jadwal ciriiri ah oo aad qorsheyneyso inaad tagto Ramallah, waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad uga gudubto tan dambe magaaladan Falastiin ee xiisaha badan.
Badda Dhimatay - Mid ka mid ah waxyaabaha ugu caansan ee lagu arko / lagu sameeyo Israel iyo Jordan. Ka fiiri Ein Geedi, keyd dabiici ah iyo aag ku teedsan Badda Dhimatay.
Negev & Judaean - lamadegaanka u dhow Badda Dhimatay, oo soo bandhigaya goobo yaab leh iyo dhul lama degaan ah, oo ay ku jiraan Mitzpe Ramon iyo laba godad kale.
Ku lugeynaya lamadegaanka Yahuuda - U bax meelaha kale ee tamashlaha; gaar ahaan durdurrada Mishmar iyo Ze'elim aad ayey isugu dhow yihiin.
eHalal Safarka Mart > Safarka Xalaal ee Falastiin > Tilmaamaha Safarka ee Jericho
Hagaha Socdaalka Kiel Xalaal